फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य: हे’र्नुहोस् कति पुग्यो ? – Sadhaiko Khabar
फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य: हे’र्नुहोस् कति पुग्यो ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ १०, २०७८ समय: ७:४३:१३
काठमाडौं / नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ बढेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले बढेको हो ।
बुधबार मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ११० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
दुई रुपैयाँ मूल्य बढेसँगै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ८२ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर २० ले वृद्धि गरेर नयाँ विक्री मूल्य अमेरिकी डलर ७३५ प्रतिकिलो लिटर कायम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।